နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: CyberLink PowerDVD 12 (latest version)
အထဲမှာ လိုင်စင်ဗားရှင်းလုပ်ဖို့အတွက် တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားပါ. စမ်းပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. သူကတော့ အားသာချက်တစ်ချက်ပါပါတယ်. 3D မျက်မှန်ရှိရင် 3D ပါ ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့. ကဲအဆင်ပြေ ပါစေဗျာ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 2:51 AM